नाकामा सडक पुर्‍याउन बजेट बढ्यो, धमाधम काम - समय-समाचार
४ असार २०७७, बिहीबार ०१:३५
दाङ – ‘कहिले काँही त भारतको भूमि टेक्नै नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । तर, के गर्नु आफ्नै शहर पुग्न घण्टौँ हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । न राम्रो बाटो छ । न गाडीनै चल्छ ।’ हरिकला विकले भनिन्– ‘बाटो बनाउन बजेट परेको छ भन्ने सुन्छु । अब गाडीमा सरर आउ जाउ गर्न पाईन्छ की ?’
राजपुर गाउँपालिका वडा नं. ७ भौवा नाकामा उनको घर छ । तर, आफ्नै घर आउजाउ गर्न उनलाई भारतकै बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भारतको बाटो कहिले पनि हिड्न नपरोस् भन्ने कामना गरिन्।
‘लकडाउनले नाका शिल छ । हामी भारत जानु परेको छैन् । नाका जोड्ने उत्तर दक्षिणको बाटो गाडी चले पुग्थ्यो ।’ उनले भनिन् – ‘देउखुरीबाट नाका झर्ने सडक भरपर्दाे छैन् । अहिले बन्न लागेको सडकलाई बलियो बनाइदिए हुन्थ्यो।’
हरेक वर्ष नाका क्षेत्रको सडक स्तरोन्नतीको लागी सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्दै आएको छ । आर्थिक मसान्त सकिने बेला सडकको काम सुरु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विनियोजन गरिएको सबै बजेट खर्च हुन सक्दैन् । जसले गर्दा थोरै बजेट खर्च हुन्छ र थोरै काम हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा उत्तर दक्षिण नाका स्तरीय सडकका लागी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बजेट छुट्याएका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा सबै बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था छ ।
नाका जोड्ने उत्तर दक्षिण सडकको लागी साढे ६ करोड बजेट छ । तर, यो सबै बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था रहेको छ । राजपुर गाउँपालिका वडा नं. ५ को जंग्रहवाबाट वडा नं. ६ को खांग्रा जोड्न प्रदेश सरकारले मात्रै डेढ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । अहिले यो डेढ करोडको बजेट बाट काम भैइरहेको प्रदेश सभा सदस्य रेवतीरमण शर्माले जानकारी दिए ।
प्रदेशसभा सदस्य शर्माले नाका क्षेत्रमा सडक सुविधा पुर्‍याउन जंग्रहवाबाट खांग्रा नाका र गोठुवा सुनपथ्री नाकाको सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट सिफारिस गर्दै आएका छन् । ‘सन्तुलित विकास हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा सडक पूर्वाधारमा नाका क्षेत्र हाम्रो प्राथमिकतामा छ’ शर्माले भने– ‘लगातार बजेट परिरहेको छ । आउने वर्ष पनि नाका सडकको लागी बजेट छ।’
जंग्रहवाबाट खांग्रा सडक खण्डको अर्काे प्याकेज तयार पारेर गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको समपुरक बजेट मार्फत ५०/५० लाख गरी एक करोड बजेट छ । यो बजेटबाट पनि काम भैरहेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं. ६ का अध्यक्ष श्याम रोकाले जानकारी दिए ।
‘काम सुरु हुनै लाग्दा लकडाउन भैदियो । अहिले काम थाल्दा वर्षा लाग्न थाल्यो । विनियोजन भएको सबै बजेटबाट काम गराउन गाह्रो छ ।’ उनले भने– ‘नाका क्षेत्र सडक सुविधा पुर्‍याउन सरकारले प्राथमिकता राखेको छ । आउने वर्ष पनि प्राथमिकता साथ बजेट हाल्दैछौं ।’
जंग्रहवाबाट खांग्रा सडक बनाउन उज्ज्वल निर्माण सेवा घोराहीले पहाडी क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । ‘पहिरो गएको ठाउँ, साँघुरो बाटो भएको ठाउँमा ग्याविन तथा मेसनरी वाल बनाउने काम चलिरहेको छ ।’ निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि दिपक न्यौपानले भने–‘लकडाउनले गर्दा समयमा काम सुरु गर्न नसकिए पनि अहिले काम चलिहरको छ।’
राजपुर गाउँपालिका वडा नं. १ को वेलाबाट सिरिया नाका जोड्न त्यहाँ पनि काम चलिरहेको छ । प्रदेश सरकारको डेढ करोड र समपुरकबाट एक करोडको बजेट गरी दुइ करोड ५० लाखको बजेट बाट काम भैरहेको हो । उत्तर दक्षिण जोड्ने तीन ओटा सडक र कोइलावासबाट राजपुरको भौवा सम्म जोड्ने सिमा सडकलाई आउदो वर्ष पनि प्राथमिकता राखिएको छ ।
सडक पूर्वाधार भरपर्दाे नहुदा नाका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकिरहेको छैन् । सडक पूर्वार नपुग्दासम्म त्यहाँ अन्य विकास निर्माणका योजनाहरु सञ्चालन गर्न कठिनाई उत्पन्न भएको छ ।